AmaProteas azimisele ukunyathela ngolusha eWest Indies
ASETHELEKILE esiqhingini saseSaint Lucia amaProteas ukuzoqala amalungiselelo emidlalo yochungechunge lwama-test azoyidlala neqembu laseWest Indies.
La maqembu agcina ukubhekana ngqo eWest Indies ngo-2010. Ngo-2016 ayeyingxenye yomqhudelwano owawufake neqembu lase-Australia. Bazodlala imidlalo yama-test emibili ezoba seDarren Sammy Cricket Ground khona eSaint Lucia.
UDean Elgar, osanda kuqokwa ngokuphelele ukuba ngukaputeni weqembu lama-test kumaProteas, uthe kumele baqale uhambo olusha kule midlalo.
“Kuyasijabulisa siyiqembu ukuthi sizophinda simele izwe lethu. Phezu kokuba sizobe sivalelekile ehhotela ngenxa ye-Covid 19 kodwa okubalulekile wukubuyela enkundleni,” kusho uElgar.
“Into esemqoka wukuthi sisheshe sijwayele isimo sezulu nendawo esizohlala kuyona, ukuze amalungiselelo ethu ahambe ngendlela. Kumele sizimisele sisazilolonge ukuze le midlalo isithole sisesimeni esihle. Lokho kusezandleni zethu.”
AmaProteas angena kulolu chungechunge nje asehlele endaweni yesikhombisa uma kukleliswa amaqembu ama-test emhlabeni, iWest Indies isendaweni yesithupha. U-Elgar uthe kumele balisebenzise leli thuba ukuze basuke kule ndawo engabafanele.
“Kumele sishintshe indlela esicabanga ngayo, akulula kodwa ngoba sikhuluma ngabadlali abawu-18 abangafani. Inhloso wukuthi sonke sikholelwe kuleli qembu nezinhlelo esisebenzela phezu kwazo.
“Inselelo enkulu enginayo nginguaputeni omusha wukuthi ngenze bonke abadlali bangethembe futhi bahambisane nezinhlelo ezizoyisa leli qembu phambili.”
Kulo nyaka amaProteas asedlale kabili kuma-test, ahlule iSri Lanka ngo 2-0 ngoJanuwari ase ehlulwa yiPakistan ngo 2-0 ngoFebhuwari. Ngaphambi kwalokho babegcine bedlale ne-England ekuqaleni kuka-2020, bakhala ngaphansi ngo 3-1.
U-Elgar uthe kabalitholanga ithuba lokuthi badlale into ehlangene ngenxa yokuthi imidlalo ibihlukene kakhulu.
“Ubhubhane luphazamise okuningi. Asikwazanga ukudlala isibalo semidlalo esanele, ngakho-ke kunzima ukusho ukuthi sikuliphi izinga siyiqembu. Njengoba sesithole leli thuba lokuqala kabusha, sifisa ukudlala imidlalo eminingi futhi sidlale kangcono,” kuqhuba uElgar.
“Siyazi ukuthi kule midlalo yama-test esayidlala nePakistan kasidlalanga ngendlela esezingeni lamaProteas. Kuningi esikufisayo kodwa asikho isidingo sokuthi sigagamele ngoba ukwakha iqembu kuthatha isikhathi.”